चीनसँगको नाका तत्काल खुल्दैन: अर्थमन्त्री महत
विराटनगर । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले अति आवश्यक सामाग्री नेपाल भित्राउन चीनसँगको नाका तत्कालै नखुल्ने बताएका छन् । भारतले अघोषित नाकावन्दी गरेपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव चुलिएसँगै चीनसँग जोडिएका नाका..
नियतवश अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप गरिएको नाकाबन्दी
माधव पौडेल एउटा सार्वभौम राष्ट्रमाथि कुनै पनि प्रकारको नाकाबन्दी अहिलेको संसारमा पूर्णतस् निषेध छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नाकाबन्दी कुनै एउटा देशले अर्को देशलाई लगाउन सक्दैन र मिल्दैन पनि । तर, नाकाबन्दी..
​माटोको ढिस्कोले पुरिएर ६ जना बालबालिकाको मृत्यु
काठमाडौं । माटोको ढिस्कोमा पुरिएर शुक्रबार कैलालीमा ६ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। दोदोधरा गाविस–७ कट्टिपुरका बालबालिकाहरुको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा १० वर्षीया सीता प्याकुरेल, ९ वर्षीया मैना सुनार, ६..
​नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया आजै थालिने, संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णय
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनको ढोका खुला गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसँग आग्रह गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले..
​बजेट कार्यान्वयनमा समस्या, आर्थिक वृद्धि दर ४.४ प्रतिशत मात्र : आइएमएफ
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट धेरै महत्वकांक्षी भएकाले कार्यान्यवनमा समस्या हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले बताएको छ। वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट ठूलो क्षति र त्यसपछिको पुनर्निमार्णलाई लक्ष्य गरी..
​विश्वलाई पुटिनको पथ प्रदर्शन?
मासा गेसान भ्लादिमिर पुटिन रुसलाई गम्भीर रूपमा लिइयोस् र उसलाई समान साझेदारको रूपमा व्यवहार गरियोस् भनी माग गर्न राष्ट्रसंघको महासभामा आए । वार्तामा प्रभावशाली हुन भ्रमणको तयारीका क्रममा रुसले सिरियामा आफ्नो..
​भारतीय राजदूतले धम्क्याएपछि चीनबाट तेल ल्याउन सकिएन : बिजुक्छे
भक्तपुर ः नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनसँग तेल ल्याउने सहमति भए पनि भारतीय राजदूतले धम्क्याएपछि सहमति कार्यान्वयनमा नआएको दाबी गरेका छन् । ‘गिरिजाप्रसाद..
​प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग माग्दै ओली बिजुक्छे निवासमा
भक्तपुर । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेबीच आज छलफल भएको छ। नयाँ सरकार गठनका बारेमा दलबीच पहिला नै सहमति भइसकेको र ओलीकै..
​खेलकुदमन्त्रीद्धारा राजीनामा, उर्जामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले गरे बर्खास्त
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका दुईजना मन्त्रीहरु विहीबार पदबाट हटेका छन् । एमालेबाट मन्त्रिपरिषदमा गएका उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल पदबाट हटेका..
बेलहियाबाट १८ वटा ईन्धनसहित १ सय २० गाडी भित्रिए
बुटवल । नेपाल भारत दुवैदेशका स्थानीय सुरक्षाकर्मी, भन्सार अधिकृत र स्थानीय व्यवसायीहरुको सहमतिपछि बुधबार केही खुकुलो गरिएको बेलहिया नाकाबाट बिहीबार पनि ईन्धनसहितका मालबाहक गाडी नेपाल भित्रिएका छन्। भारतले एक्कासी नाकाबन्दी गरेपछि..
​दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा झण्डै ७ अर्ब जम्मा भयो
काठमाडौँ । भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ विभिन्न क्षेत्रबाट अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ६ अर्ब ८८ करोड सात लाख ७६ हजार ८५८ जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गत वैशाख..
​प्रचण्डले किने (बीपीको आत्मकथा) र (बीपीका उपन्यास), पाए ५ सय रुपैयाँ डिस्काउन्ट
काठमाडौँ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भाषणका क्रममा बेलाबेलामा का‍ंग्रेस नेता बीपी कोइरालाको नाम लिइरहन्छन्। आज पुस्तक प्रदर्शनीको अवलोकनका क्रममा पनि उनले किनेका पाँचवटा पुस्तकमा दुई वटा बीपी कोइरालाकै..
सेनालाई दिएपछि चीन-भारत जोड्ने करिडोरको काम द्रुत
बागलुङ । नेपाली सेनाले जिम्मा लिएपछि कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङखण्डमा निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढेको छ। उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको बागलुङखण्डमा गत असार दोस्रो सातादेखि नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको..
काठमाडौं । आर्थिक नाकाबन्दी, आवत–जावतमा रोक लगाउन नपाउनेजस्ता थुपै्र नैसर्गिक अधिकार नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित देशका लागि निर्धारण गरिएको छ । अहिले भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्व समुदायले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार छिनेर..
​प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन दलका शीर्षनेता र महन्थ ठाकुरबीच वार्ता
काठमाडौं । प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका नेता एवं तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच विहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वार्ता हुँदैछ । वार्ताका लागि ठाकुर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुग्दैछन् । बालुवाटारमा..
संसदीय समितिले भन्यो:- टीकापुर घटनामा देउवा, रावल, भट्ट, यादव, महतो र सिंह दोषी
काठमाडौं । संसदको एक छानविन समितिले कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डको पृष्ठभूमिमा ६ जना नेताहरुलाई दोषी पाएको छ । यद्यपि समितिले औपचारिकरुपमा सो घटनामा कसैलाई दोषी ठहर गरेर कारवाहीको सिफारिस भने गरेको..
नाका सञ्चालन गर्न सरकारले चीनसँग गर्‍यो आग्रह
काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपछि अवरुद्ध भएको चीनसँगको व्यापारिक नाका शीघ्र सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न चीनसँग आग्रह गरेको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु..
नेपालमा भारत विरोधी भावना जागृत हुनु दुःखद्: राजदूत रे
काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्जीत रेले नेपालमा भारतविरोधी भावना जागृत भएको भन्दै दुःख ब्यक्त गरेका छन् । उनले नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन र भारतीय झन्डा..
बाराक ओबामाले नेपाली संविधानको स्वागत गरे
न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नेपालमा लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान जारी भएकोमा नेपाल र नेपाली जनतालाई बधाई एवम् शुभकामना दिनुभएको छ । राष्ट्रसङ्घको ७०औँ महासभा भाग लिन आउनुभएका राष्ट्र एवम्..
​के सोच्दै छन् दिल्ली र बेइजिङ ? भारतको सन्देशः अघोषित नाकाबन्दी तत्काल हट्दैन
​काठमाडौं । भारतले नयाँ संविधानपछि तराई–मधेसमा उत्पन्न समस्या समाधान नभएसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध पूर्ववत् रूपमा सहज हुन नसक्ने जनाउ दिएको छ । ‘सुरक्षा’लाई कारण देखाउँदै भारतले अहिलेकै अवस्थामा भारतबाट आपूर्ति सहज..
उपराष्ट्रपतिद्वारा मधेस आन्दोलनको समर्थनमा वक्तव्यबाजी
काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले तराई मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई घुमाउरो रुपमा समर्थन गर्दै वक्तव्य जारी गरेका छन्। उपराष्ट्रपति झाले आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी तराई मधेस आन्दोलनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई..
नाकाबन्दीको मौका मुलुकको विकासका लागि एउटा घुम्ती: गभर्नर नेपाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिएकै कारण लगानीको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लगानी भित्र्याउन नसकिएको बताएका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रुपन्देहीको ६२औँ..
​भारतको नाकाबन्दीका सम्बन्धमा सरकारी तयारी के छ ?
भारतले नाकाबन्दी गरेको एक साता भइसकेको छ, ग्यास, पेट्रोल अभाव छ, तर सरकारले रणनीति बनाउन सकेको छैन समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा छौ । भारतको विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ, सकारात्मक रूपमा समस्या..
​भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध उर्लिए विद्यार्थी, भारत विरुद्ध जनमत बढ्दै
नेपालगन्ज । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरी नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको गरेको भन्दै युवा तथा विद्यार्थीहरुले नेपालगन्जमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रर्दशनमा उत्रिएका युवा तथा बिद्यार्थीहरुले ‘ब्याकअफ इन्डिया’ लेखिएको ब्यानर,..
‘रअ’का पूर्व हाकिम बालकोट र लाजिम्पाटमा सक्रिय
काठमाडौं । विशेष दूतका रुपमा आएका एस जयशंकर ‘असफल’ भएर फर्किएपछि भारतले सम्वन्ध सुुधारका लागि गोप्य रुपमा अर्का दूतलाई काठमाडौं पठाएको छ । ‘रअ’ एकजना शक्तिशाली एवं विवादित पूर्व प्रमुखले..
​भारतीय राजदूतलाई बोलाई आज स्पष्टीकरण सोधिने, प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत भारत जाँदै
काठमाडौँ । स‍ंविधान घोषणासँगै चिस्सिएको दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धकै निरन्तरतामा विरलै गरिने भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालय बोलाई स्पष्टीकरण लिने निर्णय सरकारले गरेको छ। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बिहीबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकले..
​संसदको अधिवेशन आह्वान, असोज १५ गतेबाट नयाँ प्रधानमन्त्री छनौटको प्रक्रिया शुरु हुने
काठमाडौं । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । आगामी असोज १५ गते शुक्रबार अन्तराष्ट्रिय केन्द्रमा दिउँसो एक बजे बस्नेगरी अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको..
​हर्जयात्रीबीच भएको भागदौडमा परी ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या पाँच पुग्यो
काठमाडौं । साउदी अरेबको मक्कामा हर्ज यात्राका क्रममा भएको भागदौडमा परी ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या पाँच पुगेको छ । भागदौडमा परी पर्साका पासपोर्ट नम्बर ०८६५८०९७ का अजहर मिया, पासर्पोट नम्बर ०८६५८०७७..
चालु आर्थिक बर्षमा हालसम्म पुँजीगत खर्च २ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । चालू आर्थिक बर्षलाई बजेट कार्यान्वयनको बर्ष घोषणा गरिएको भएपनि हालसम्म पुँजीगत तर्फ जम्मा २ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। यो तथ्याङकलाई आधार मान्दा..
​नेपालको संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका छैनौंः भारतीय विदेश मन्त्रालय
काठमाडौं । भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको संविधान संशोधन गर्नका लागि कुनै सुझाव नदिएको बताएको छ। बुधबार साँझ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै ुइन्डियन एक्सप्रेसुमा बुधबार छापिएको समाचार गलत भएको..
Results 1098: You are at page 27 of 37